ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आ’क्रमण गर्ने लाई गगन थापाको चे’तावनी,- – All top Here
Home/समाचार/ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आ’क्रमण गर्ने लाई गगन थापाको चे’तावनी,-
ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आ’क्रमण गर्ने लाई गगन थापाको चे’तावनी,-
काठमाडौं, ११ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री गगन कुमार थापाले सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आज चितवनमा भएको आक्रमणको घोर निन्दा गरेका छन् । चितवनमा एक कार्यक्रममा सहभागी जनाउन गएको बेला शाहीमाथि उनी बसेकै होटलमा पुगेर अज्ञात समूहले निर्घात कुटपिट गरेको हो । शाहीको टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको छ । उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याईएको छ ।कांग्रेस नेता थापाले शाहीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कायरको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्-‘ज्ञानेन्द्र शाही माथि आक्रमण गर्ने विचरा कायर हरुका बारेमा के टिप्पणी गर्नु?
यो कायरताका लागि उक्साउनेहरु दोषी हुन्। अब हिसाबकिताब यिनैसंग माग्नुपर्छ।’शाहीमाथि शुक्रबार भरतपुरको चौविसकोठीमा नेपालका लागि नेपाली अभियानले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम बिथोलिएपछि आफू बसेको होटलबाट बाहिरिने क्रममा दिउँसो आक्रमण भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरको होटल ग्लोवलबाट बाहिरिने क्रममा बा३ख ८४५८ नंको माइक्रोबसमा आक्रमण भएको हो । युवा समूहले ढुङ्गा, रड, लाठी प्रहार गरी माइक्रोबसभित्र रहेका शाहीसहितको समूहमाथि आक्रमण गरेको हो ।प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार घाइते शाही चितवन मेडिकल कलेजको उपचारपछि काठमाडौँ ल्याईएको छ । तर, शाहीको अवस्था खतरामुक्त रहेको मल्लले जानकारी दिएका छन् । शाहीले काठमाडौँको
अस्पतालमा उपचार गर्न चाहेकोले नै उनलाई यहाँ ल्याईएको बताइएको छ । उनको खुट्टामा चोट लागेको छ भने टाउको र शरीरमा समस्या छ । आक्रमणमा घाइते भएका अन्य दुईको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।प्रहरी उपरीक्षक मल्लका अनुसार सो क्रममा आक्रमण गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । शाहीमाथि आक्रमण भएको खबर पाउनासाथ उद्धार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक मल्लको भनाइ छ । त्यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवाहरुले चौविसकोठीमा शाहीले सम्बोधन गर्ने गरी गर्न लागिएको कार्यक्रम बिथोलेका थिए । झडप हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पनि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।
मलेसियामा नेपाली कामदार बोकेको बस दुर्घटना
काठमाडौं :५ म्यग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का
उपनिर्वाचन को सुरु भयो मतगणना ताजा अपडेट !
अत्यधिक गर्मीका कारण मलामी गएका व्यक्तिको मृत्यु